ERA ... — Tsara Soratra
Ny nantenain'ny masonao angamba, lala, dia lahateny manga, voarindra sy voalanto ho tena tonon-kanto, fa tsy hampirangaranga baraingo adaladala sy mampisalasala ny sainao mandroroa eo anelanelan'ny lalana ankiroa: hiverina sa hiditra ?
Fa rehefa nitantavana ny lanitra izahay, izay kanto tomandavana sy manga ranoray, tsy misy mahakasika toy ny nofy midadasika, dia indro naharay tapiany sy pitiny sy potiny indraindray. Ka ireny taitainy nalainay vao maraina ireny ange, lala, no tianay ho sahala amin'ny voahangy findaisinao an-tsandry e ! Na koa (nahoana moa ?) havadika ho jabora hanazava ny alinao sy ny ora tsy mampisava ny sombin-danitrao ho tena mangamanga kanto sy madio.
Ka hanainga isika sa ? ... izay eranao ihany io ! sa ... mbola misy "fa" sy "sao" misaosao ao an-dohanao ? Ndao fa ho hitanao e !
Mpandrary teny avy ao amin'ny Faribolana Sandratra ao Antananarivo ao i Tahirintsoa. 30 taona mahery vitsivitsy. Namoaka soratra tetsy sy teroa tamina amboara niarahana tamina namana. Afaka vakianao eto ny resaka nifanaovy tamin'ny Poeta Malagasy.